Iindaba -Uyigcina njani iSilinda yeHydraulic
Yenza umsebenzi olungileyo ekucoceni, ufuna ukwenza umsebenzi olungileyo kulondolozo lwe-hydraulic silinda, emva koko kufuneka wenze umsebenzi olungileyo wokucoca. Lo ngumcimbi obaluleke kakhulu, isilinda hydraulic kwinkqubo yokusetyenziswa kwexesha elide iya kuvelisa uthuli oluninzi kunye namabala, ukuba ayicocwanga ngexesha, iya kuchaphazela ukusetyenziswa kwesiqhelo kwemveliso, ke kufuneka senze umsebenzi olungileyo ekucoceni izixhobo emva kokuzisebenzisa yonke imihla, ekwayindlela efanelekileyo yokugcina esi sixhobo.
Okokuqala, ioyile hydraulic kufuneka itshintshwe rhoqo kwaye isihluzo sesistim kufuneka sicocwe ukuqinisekisa ucoceko kunye nokwandisa ubomi benkonzo.
Okwesibini, isilinda yeoyile kusetyenziso ngalunye, ukwenza ulwandiso olupheleleyo kunye nokuncipha kovavanyo lokubaleka imivumbo emi-5, emva koko ubaleke nomthwalo. Ngoba? Ngale ndlela, umoya okwinkqubo ungakhathala, kwaye iinkqubo zinokufudunyezwa kwangaphambili. Ubukho bomoya okanye amanzi kwinkqubo inokuyiphepha ngokufanelekileyo imeko yokuqhuma kwegesi (okanye ukutshisa) kwibhlokhi yesilinda, eya konakalisa itywina kwaye ibangele ukuvuza kwangaphakathi kwesilinda seoyile.
Okwesithathu, ubushushu benkqubo kufuneka bulawulwe kakuhle. Ukuba ubushushu beoyile buphezulu kakhulu, ubomi benkonzo yesitywina buya kuncitshiswa. Ukuba iqondo lobushushu leoyile liphezulu kakhulu ixesha elide, itywina liya kukhubazeka ngokusisigxina okanye lingasebenzi ngokupheleleyo.
Okwesine, khusela umphezulu wangaphandle wepiston ukuthintela ukonakala kwetywina ngokungqubeka nokukrwela. Coca umsesane wothuli wetywina elinamandla lesilinda seoyile kunye nentlenge kwityala lepiston elivelileyo, ukuthintela ubumdaka kumphezulu wentonga yepiston ekungeneni kwisilinda seoyile kwaye ukonakalise ipiston, isilinda okanye itywina.
Okwesihlanu, jonga umsonto, i-bolt kunye nezinye iinxalenye zokuqhagamshela rhoqo, kwaye uzibambe ngokukhawuleza ukuba zikhululekile.
Okwesithandathu, uhlala uthambisa izinto zokudibanisa ukuthintela ukubola okanye ukunxiba okungaqhelekanga kwindawo engenaoyile.